Lafika Kanjani IBhayibheli Kithi, Futhi Ingabe Ngempela LiyiZwi LikaNkulunkulu? - Amaphakethe weBeroean - Umbuyekezi we-JW.org
Lafika Kanjani IBhayibheli Kithi, Futhi Ingabe Ngempela LiyiZwi LikaNkulunkulu?
by UMeleti Vivlon | UJan 6, 2021 | iBhayibheli, Amavidiyo | 16 amazwana
U-Eric Wilson: Siyakwamukela. Kunabaningi okuthi ngemuva kokushiya inhlangano yoFakazi BakaJehova balahlekelwe yikho konke ukukholwa kuNkulunkulu futhi bangabaze ukuthi iBhayibheli liqukethe izwi lakhe lokusiqondisa ekuphileni. Lokhu kubuhlungu kakhulu ngoba iqiniso lokuthi abantu basidukisile akumele lisenze siphelelwe ukwethemba ubaba wethu osezulwini. Noma kunjalo, kwenzeka kaningi kakhulu, ngakho-ke namuhla ngicele uJames Penton oyingcweti emlandweni wezenkolo ukuthi axoxe ngemvelaphi yeBhayibheli njengoba sinalo namuhla, nokuthi kungani singathemba ukuthi umyalezo walo uyiqiniso futhi uthembekile namuhla njengoba kwakunjalo ngenkathi kubhalwa ekuqaleni.
Ngakho-ke ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngizokwethula uProf. Penton.
UJames Penton: Namuhla, ngizokhuluma ngezinkinga zokuqonda ukuthi liyini ngempela iBhayibheli. Izizukulwane ngezizukulwane eziphakathi komhlaba obanzi wamaProthestani, iBhayibheli belibhekwe njengolibaluleke kakhulu ukuthi kungani amaKristu amaningi akholwa. Ngaphandle kwalokhu, abaningi baye baqonda ukuthi izincwadi ezingama-66 zeBhayibheli lamaProthestani ziyizwi likaNkulunkulu futhi azinandaba nathi, futhi bavame ukusebenzisa uThimothewu wesibili 3:16, 17 lapho sifunda khona ukuthi, “Yonke imiBhalo inikezwe ukuphefumulelwa nguNkulunkulu futhi inenzuzo yokufundisa, yokusola, yokulungisa, nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. ”
Kepha lokhu akusho ukuthi iBhayibheli alinaphutha. Manje, iBhayibheli lalingabhekwa ngaso sonke isikhathi njengesisekelo sodwa segunya amaKristu okwakumele aphile ngalo. Eqinisweni, ngiyakhumbula ngisengumfana eNtshonalanga Canada ngibona okuthunyelwe kwamaRoma Katolika, izitatimende ezithi, 'isonto lasinika iBhayibheli; iBhayibheli alisinikanga isonto. '
Ngakho-ke kwaba yilelo gunya lokuhumusha nokunquma okushiwo yimibhalo ngaphakathi kweBhayibheli eyayishiyelwe isonto laseRoma nabapapa balo kuphela. Kuyathakazelisa nokho ukuthi lesi simo asizange sithathwe njengemfundiso kwaze kwaba ngemva kokugqashuka kweNguquko YamaProthestani eMkhandlwini WamaKatolika waseTrent. Ngakho-ke, izinguqulo zamaProthestani zavinjelwa emazweni amaKatolika.
UMartin Luther waba ngowokuqala ukwamukela konke okubhalwe ezincwadini ezingama-24 zemiBhalo YesiHeberu, yize azihlelile ngendlela ehlukile kunamaJuda nangenxa yokuthi wayengabheki abaprofethi abancane abangu-12 njengencwadi eyodwa. Ngakho-ke, ngesisekelo se- 'sola scriptura', leyo 'yimfundiso eyimiBhalo kuphela', ubuProthestani baqala ukungabaza izimfundiso eziningi zamaKhatholika. Kepha uLuther uqobo wayenenkinga ngezincwadi ezithile zeTestamente Elisha, ikakhulukazi incwadi kaJakobe, ngoba yayingahambelani nemfundiso yakhe yensindiso ngokukholwa kuphela, futhi okwesikhashana incwadi yeSambulo. Noma kunjalo, ukuhumushela kukaLuther iBhayibheli olimini lwesiJalimane kwasungula isisekelo sokuhumushelwa kwemiBhalo nakwezinye izilimi.
Isibonelo, uTindall wathonywa nguLuther futhi waqala inguqulo yesiNgisi yemiBhalo futhi wabeka isisekelo sezinguqulo zakamuva zesiNgisi, kufaka phakathi i-King James noma i-Authorized Version. Kepha ake sithathe isikhashana ukubhekana nezici ezithile zomlando weBhayibheli ngaphambi kweNguquko ezingaziwa kakhulu.
Okokuqala, asazi kahle ukuthi kungani iBhayibheli lesiHeberu lahlanjululwa ngaphambili noma ngobani ngaphambilini noma yiziphi izincwadi ezazizonqunywa ukuthi zifakwe kulo. Yize sinemininingwane emihle kakhulu yokuthi kwakungekhulu lokuqala leminyaka lesikhathi sobuKristu, kepha kufanele kubonwe ukuthi mkhulu umsebenzi wokuhlela wawenziwe ngemuva nje kokubuya kwamaJuda ekuthunjweni yiBabiloni, okwenzeka ngo-539 BC noma ngokushesha ngemuva kwalokho. Umsebenzi omningi wokusebenzisa izincwadi ezithile e-Jewish Bible kuthiwa wenziwa ngumpristi nombhali u-Ezra owagcizelela ukusetshenziswa kweTorah noma izincwadi zokuqala ezinhlanu zamaBhayibheli amaJuda namaKrestu.
Kuleli qophelo kufanele sazi ukuthi kusukela cishe ngonyaka ka-280 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu, inani elikhulu lamaJuda aphesheya ahlala e-Alexandria, eGibhithe laqala ukuhumushela imiBhalo YamaJuda ngesiGreki. Kakade, iningi lalawo maJuda lalingasakwazi ukukhuluma isiHeberu noma isi-Aramaic zombili ezikhulunywa kulokho namuhla okuyi-Israel. Umsebenzi abawukhiqizayo wabizwa ngokuthi inguqulo yeSeptuagint, nayo eyaba yinguqulo ecashunwe kunabo bonke emiBhalweni eTestamenteni elisha lamaKhristu, ngaphandle kwezincwadi ezazizogcwaliswa njengezihlanjululwe eBhayibhelini lamaJuda futhi kamuva naseBhayibhelini lamaProthestani. . Abahumushi be-Septuagint bangeze ezinye izincwadi eziyisikhombisa ezingavamisile ukuvela kumaBhayibheli amaProthestani, kepha zithathwa njengezincwadi ezinesidina futhi ngakho-ke zikhona kumaBhayibheli amaKhatholika nawase-Eastern Orthodox. Eqinisweni, abefundisi bama-Orthodox nezazi babevame ukubheka i-Septuagint Bible njengephakeme kunombhalo wesiHeberu samaMasorete.
Engxenyeni yakamuva yenkulungwane yokuqala yeminyaka CE, amaqembu ababhali abangamaJuda abaziwa ngokuthi amaMasorete akha uhlelo lwezimpawu ukuqinisekisa ukuphinyiselwa okufanele nokuphindaphindwa kombhalo weBhayibheli. Bazamile nokulinganisa ukwahlukaniswa kwezigaba nokugcina ukukhiqizwa okufanele kombhalo ngababhali besikhathi esizayo ngokuhlanganisa uhlu lwezici ezibalulekile ze-orthographic nezilimi. Izikole ezimbili eziyinhloko, noma imindeni yamaMasorete, uBen Naphtoli noBen Asher, zakha imibhalo yamaMasorete ehluke kancane. Inguqulo kaBen Asher yanqoba futhi yakha isisekelo semibhalo yesimanje yeBhayibheli. Umthombo omdala kunayo yonke weMasoretic Text Bible yi-Aleppo Codex UKeter Aram Tzova kusukela cishe ku-925 AD Nakuba kungumbhalo osondelene kakhulu nesikole sikaBen Asher samaMasorete, usinda ungaphelele, njengoba uswele cishe yonke iTorah. Umthombo ophelele wakudala wombhalo wamaMasorete yiCodex Leningrad (B-19-A) iCodex L kusukela ngo-1009 AD
Ngenkathi umbhalo weBhayibheli wamaMasorete ungumsebenzi onakekela ngokuvelele, awuphelele. Isibonelo, ezimeni ezimbalwa kakhulu, kunezinguqulo ezingenamqondo futhi kunamacala lapho imithombo yeBhayibheli yakuqala yoLwandle Olufile (etholwe kusukela ngeMpi Yezwe II) ivumelana kakhulu ne-Septuagint kunombhalo weMasoretic we-Jewish Bible. Ngaphezu kwalokho, kunomehluko ophawuleka kakhulu phakathi kombhalo weMasoretic weBhayibheli kanye ne-Septuagint Bible kanye ne-Torah yaseSamariya eyehlukile kubude bempilo yamanani wangaphambi kukazamcolo wosuku lukaNowa anikezwe encwadini kaGenesise. Ngakho-ke, ngubani ongatshela ukuthi iyiphi yale mithombo yokuqala futhi ngakho-ke ilungile.
Izinto ezithile zidinga ukucatshangelwa maqondana namaBhayibheli anamuhla, ikakhulukazi maqondana neMibhalo YamaKristu YesiGreki noma iTestamente Elisha. Okokuqala, kuthathe isonto lamaKrestu isikhathi eside ukunquma ukuthi yiziphi izincwadi okufanele zihlanzwe noma zinqunywe njengemisebenzi efanele ekhombisa ubunjalo bobuKrestu futhi futhi iphefumulelwe. Qaphela ukuthi izincwadi eziningi zeTestamente Elisha zaba nesikhathi esinzima ekwamukelweni ezingxenyeni ezikhuluma isiMpumalanga sesiGrikhi zoMbuso WaseRoma, kepha ngemuva kokuba ubuKrestu sebenziwe ngokusemthethweni ngaphansi kukaConstantine, iTestamente Elisha lagcotshwa njengalokhu likhona namuhla eMbusweni WaseRoma Wentshonalanga . Lokho kwenzeka ngo-382, kepha ukwamukelwa kokugcotshwa kohlu olufanayo lwezincwadi akuzange kwenzeke eMbusweni WaseMpumalanga WaseRoma kuze kube semva kuka-600 AD Kodwa-ke, kufanele kwaziwe ukuthi ngokuvamile, izincwadi ezingama-27 ezagcina zamukelwa njengohlu lwezincwadi zeBhayibheli, kwamukelwa isikhathi eside njengokukhombisa umlando nezimfundiso zebandla lokuqala lamaKrestu. Isibonelo, u-Origen (wase-Alexandria 184-253 CE) kubukeka sengathi wasebenzisa zonke lezi zincwadi ezingama-27 njengemiBhalo kamuva eyagunyazwa ngokusemthethweni esikhathini eside ngaphambi kokuba ubuKristu bube semthethweni.
EMbusweni waseMpumalanga, uMbuso WaseMpumalanga WaseRoma, isiGreki sahlala silulimi oluyisisekelo kumaBhayibheli angamaKristu nakumaKrestu, kepha engxenyeni esentshonalanga yombuso eyawela kancane kancane ezandleni zabahlaseli baseJalimane, njengamaGoth, amaFranks ama-Angles namaSaxon, ukusetshenziswa kwesiGreki kucishe kwaphela. Kepha isiLatini sahlala, neBhayibheli lokuqala lebandla laseNtshonalanga kwakuyiVulgate yesiLatin kaJerome kanti isonto laseRoma laliphikisana nokuhunyushelwa kwalowo msebenzi kunoma iziphi izilimi zomdabu ezazithuthuka emakhulwini eminyaka amade okuthiwa yiNkathi Ephakathi. Isizathu salokho ukuthi isonto laseRoma lalinomuzwa wokuthi iBhayibheli lingasetshenziswa ngokumelene nezimfundiso zesonto, uma liwela ezandleni zamalungu avamile namalungu ezizwe eziningi. Futhi ngenkathi kwaba nokuhlubuka esontweni kusukela ngekhulu le-11 kuya phambili, iningi lazo lingaqedwa ngokuxhaswa yiziphathimandla zezwe.
Nokho, kwaba nenguqulo eyodwa ebalulekile yeBhayibheli eNgilandi. Lokho kwakungukuhumusha kukaWycliffe (izinguqulo zikaJohn Wycliffe Bible zenziwa ngesiNgisi esiphakathi cishe ngo-1382-1395) weTestamente Elisha owahunyushwa ususelwa olimini lwesiLatini. Kepha kwavalwa ngokomthetho ngo-1401 kanti labo ababeyisebenzisa bazingelwa babulawa. Ngakho-ke kwaba ngenxa yoKuvuselelwa kabusha lapho iBhayibheli laqala khona ukubaluleka emazweni amaningi aseNtshonalanga Yurophu, kepha kufanele kuqashelwe ukuthi ezinye izenzakalo kwakumele zenzeke ngaphambi kwesikhathi ezazibalulekile ekuhumusheni nasekulungisweni kweBhayibheli.
Ngokuqondene nolimi lwesiGreki olubhalwayo, cishe ngonyaka ka-850 AD kwavela uhlobo olusha lwezinhlamvu zesiGreki, ezibizwa ngokuthi “i-Greek minuscule. Phambilini, izincwadi zesiGreki zazibhalwa ngama-unicals, okufana nezinhlamvu ezinkulu ezihlotshisiwe, futhi zingenayo i-br phakathi kwamagama nezimpawu zokubhala; kepha ngokwethulwa kwezinhlamvu ezincane, amagama aqala ukuhlukaniswa kwaqala ukwethulwa izimpawu zokubhala. Ngokuthakazelisayo, into efanayo efanayo yaqala ukwenzeka eNtshonalanga Yurophu ngokusungulwa kwento eyayibizwa ngokuthi “i-minuscule kaCarolingian.” Ngakho-ke nanamuhla, abahumushi beBhayibheli abafuna ukubheka imibhalo yesandla yasendulo yesiGreki babhekene nenkinga yokuthi bangafaka kanjani izimpawu zokubhala, kepha ake siqhubekele ku-Renaissance, ngoba ngaleso sikhathi kwenzeka izinto eziningi.
Okokuqala, kube nokuvuka okukhulu ngokubaluleka komlando wasendulo, obekubandakanya ukutadisha isiLatin sakudala kanye nentshisekelo evuselelwe yesiGreki nesiHeberu. Ngakho-ke, izazi ezimbili ezibalulekile zavela emakhulwini eminyaka we-15 nasekuqaleni kwekhulu le-16. Laba kwakunguDesiderius Erasmus noJohann Reuchlin. Bobabili babeyizazi ezingamaGrikhi kanti uReuchlin wayebuye abe yisazi esingumHeberu; kulaba bobabili, u-Erasmus wayebaluleke kakhulu, ngoba nguyena owakhipha izinguqulo eziningana zeTestamente Elisha lesiGreki, ezingaba isisekelo sezinguqulo ezintsha.
Lokhu kubuyiselwa kwaba ukubukezwa kombhalo ngokususelwa ekuhlaziyweni ngokucophelela kwemibhalo yasekuqaleni yamaKhristu yesiGreki eyasebenza njengesisekelo sokuhumusha okuningi kweTestamente Elisha ezilimini ezahlukahlukene, ikakhulukazi isiJalimane, isiNgisi, isiFulentshi neSpanish. Akumangalisi ukuthi izinguqulo eziningi zazingezamaProthestani. Kodwa njengoba isikhathi sihamba, amanye nawo ayengamaKatolika. Ngenhlanhla, konke lokhu kwakungemuva nje kokuthuthuka komshini wokuphrinta ngakho-ke kwaba lula ukuphrinta izinguqulo eziningi ezehlukene zeBhayibheli, kanye nokusabalalisa kabanzi.
Ngaphambi kokuqhubekela phambili, kufanele ngiphawule okunye; lokho kwaba ukuthi ekuqaleni kwekhulu le-13 uMbhishobhi Omkhulu uStephen Langton wodumo lwaseMagna Carta, wethula umkhuba wokwengeza izahluko cishe kuzo zonke izincwadi zeBhayibheli. Kwathi lapho izinguqulo zeBhayibheli zesiNgisi zenzeka, izinguqulo zokuqala zeBhayibheli lesiNgisi zazisuselwa kulokho okwabulawelwa ukholo uTyndale noMales Coverdale. Ngemuva kokushona kukaTyndale, uCoverdale waqhubeka nokuhumusha imiBhalo okwakubizwa ngokuthi yi-Matthew Bible. Ngo-1537, kwaba yiBhayibheli lesiNgisi lokuqala ukunyatheliswa ngokomthetho. Ngaleso sikhathi, uHenry VIII wayesesuse iNgilandi eSontweni LamaKatolika. Kamuva, kwanyatheliswa ikhophi ye-Bishops 'Bible kwase kulandela i-Geneva Bible.
Ngokwesitatimende esiku-Intanethi, sinakho okulandelayo: Ukuhumusha okuthandwa kakhulu (okuhunyushwa ngesiNgisi) bekuyiGeneva Bible 1556, eyaqala ukukhishwa eNgilandi ngo-1576 eyayenziwe eGeneva ngamaProthestani angamaNgisi ahlala ekudingisweni ngesikhathi sikaBloody Mary's. ukushushiswa. Ayikaze igunyazwe yi-Crown, yayithandwa kakhulu phakathi kwamaPuritan, kepha hhayi phakathi kwabefundisi abaningi abasadla ngoludala. Kodwa-ke, ngo-1611, i-King James Bible yanyatheliswa futhi yashicilelwa yize kwathatha isikhathi esithile ukuthandwa noma ukuthandwa kakhulu kune-Geneva Bible. Kodwa-ke, beyinguqulo engcono yesiNgisi sayo esihle, ubumnene bayo, kepha iphelelwe yisikhathi namuhla ngoba isiNgisi sishintshe kakhulu kusukela ngo-1611. Sasisekelwe emithonjeni embalwa yesiGreki neyesiHeberu eyayikhona ngaleso sikhathi; sinezinye eziningi namuhla futhi ngoba amanye amagama amaningi esiNgisi asetshenziswe kuwo awaziwa ngabantu ngekhulu lama-21.
Kulungile, ngizolandela ngalesi sethulo ngengxoxo yesikhathi esizayo ephathelene nokuhumusha kwanamuhla nezinkinga zazo, kepha njengamanje ngifuna ukumema uzakwethu u-Eric Wilson ukuthi azoxoxa ngezinye zezinto engizivezile kulesi sifinyezo somlando weBhayibheli .
U-Eric Wilson: Kulungile Jim, usho izinhlamvu ezincane. Yini i-minuscule yamaGrikhi?
UJames Penton: Yebo, igama elithi minuscule empeleni lisho izinhlamvu ezincane, noma izinhlamvu ezincane, kunezinhlamvu ezinkulu. Futhi lokho kuyiqiniso ngesiGreki; Kuyiqiniso futhi ngohlelo lwethu lokubhala noma lokuphrinta.
Eric UWilson: Ukhulume nangezimpesheni. Kuyini ukubuyiselwa kwemali?
UJames Penton: Yebo, ukubuyela emuva, lelo yigama okufanele lifundwe abantu impela uma benentshisekelo kumlando weBhayibheli. Siyazi ukuthi asinayo imibhalo yesandla yokuqala noma imibhalo eya eBhayibhelini. Sinamakhophi futhi umqondo bekuwukubuyela kumakhophi okuqala esinawo futhi mhlawumbe, ngezindlela ezahlukahlukene ezehlele kithi, futhi kunezikole zokubhala. Ngamanye amagama, imibhalo emincane noma hhayi imibhalo emincane, kepha imibhalo ye-uncial evela ezikhathini zokuqala zamaRoma, futhi lokhu kwenza kwaba nzima ukwazi kahle ukuthi yimiphi imibhalo eyayikhona ngesikhathi sabaphostoli, ake sithi, ngakho-ke u-Erasmus waseRotterdam wanquma yenza ukubuyela emuva. Manje kwakuyini lokho? Waqoqa yonke imibhalo yesandla eyaziwayo kusukela ezikhathini zasendulo eyayibhalwe ngesiGreki, wayidlula, wayifundisisa ngokucophelela futhi wanquma ukuthi yibuphi ubufakazi obedlula bonke bombhalo noma umBhalo othile. Futhi wabona ukuthi kwakukhona imibhalo ethile eyayisehlelweni lwesiLatin, inguqulo eyayisetshenziswe amakhulu eminyaka emiphakathini yaseNtshonalanga, futhi wathola ukuthi kunezimo ezazingekho emibhalweni yesandla yokuqala. Ngakho-ke wakufunda lokhu futhi wenza ukubuyela emuva; lowo kwakuwumsebenzi owawusekelwe ebufakazini obuhle kakhulu ayenabo ngaleso sikhathi, futhi wakwazi ukuqeda noma ukukhombisa ukuthi imibhalo ethile yesiLatini yayingalungile. Futhi bekuyintuthuko esize ekuhlanzweni kwemisebenzi yeBhayibheli, ukuze sithole okuthile okuseduze nokwasekuqaleni ngokubuyiselwa kwemali.
Manje, kusukela ngesikhathi sika-Erasmus ekuqaleni kwekhulu le-16, sekutholakele imibhalo eminingi yesandla eminingi kanye ne-papyri (ama-papyrus, uma uthanda) futhi manje sesiyazi ukuthi ukubuyiswa kwakhe kwemali kwakungekwesimanje futhi izazi bezisebenza kusukela lapho empeleni, ukuhlanza ama-akhawunti asemibhalweni, njengeWestcott noHort ngekhulu le-19 kanye nokubuyiselwa kwemali kwakamuva kakhulu kusukela ngaleso sikhathi. Futhi-ke lokho esinakho isithombe sokuthi zazinjani izincwadi zokuqala zebhayibheli, futhi lezo zivela kakhulu ezinguqulweni zakamuva zeBhayibheli. Ngakho-ke, ngandlela thile, ngenxa yempindiselo iBhayibheli lihlanzwe futhi lingcono kunangesikhathi sika-Erasmus futhi lingcono impela kunangesikhathi seNkathi Ephakathi.
U-Eric Wilson: Kulungile Jim, manje ungasinikeza isibonelo sembuyiselo? Mhlawumbe leyo eyenza abantu bakholelwe kuZiqu-zintathu, kodwa kusukela lapho kukhonjiswe ukuthi ayinamanga.
UJames Penton: Yebo, kunembhangqwana yalezi hhayi kuphela maqondana noZiqu-zintathu. Mhlawumbe enye yezinto ezinhle kakhulu, ngaphandle kwalapho, yindaba yowesifazane obanjwe ephinga futhi walethwa kuJesu ukuze amgwebe futhi wenqaba ukukwenza. Leyo akhawunti ingamanga noma kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi "i-akhawunti ezulazulayo noma ehambayo," evela ezingxenyeni ezihlukene zeTestamente Elisha futhi, ikakhulukazi, amaVangeli; lokho munye; bese kuba khona okubizwa nge- “Ukhefana kaZiqu-zintathu, ”Okungukuthi, bathathu abafakaza ezulwini, uBaba, iNdodana noMoya oNgcwele noma uMoya oNgcwele. Futhi lokho kufakazelwe ukuthi kungamanga noma kunganembile, hhayi eBhayibhelini lokuqala.
U-Erasmus wayekwazi lokhu futhi ezikweletini ezimbili zokuqala azikhipha, akuzange kuvele futhi wayebhekene nokudinwa okukhulu yizazi zenkolo zamaKhatholika futhi babengafuni ukuthi lokho kukhishwe emiBhalweni; babeyifuna phakathi lapho, noma ngabe kwakufanele noma cha. Futhi, ekugcineni, wephuka wathi kahle uma ungathola umbhalo wesandla okhombisa ukuthi lokhu bekukhona, futhi bathole umbhalo wesikhathi sekwephuzile futhi wawufaka, kuhlelo lwesithathu lwempesheni yakhe, futhi-ke kwakungaphansi kwengcindezi . Wayazi kangcono, kepha ngaleso sikhathi noma ngubani owayemelana nabefundisi bamaKatolika noma, ikakhulukazi, amaProthestani amaningi, angagcina ngokushiswa esigxotsheni. Futhi u-Erasmus wayeyindoda ekhanyayo kakhulu ukuba angakubona lokhu futhi impela babebaningi ababezomvikela. Wayengumuntu onobuhlakani kakhulu owayevame ukuhamba esuka kwenye indawo eya kwenye, futhi wayenesifiso esikhulu sokuhlanza iBhayibheli, futhi sinesikweletu esikhulu ku-Erasmus futhi manje sekuyaziwa ngempela ukuthi ukuma kwakhe kwakubaluleke kangakanani.
U-Eric Wilson: Umbuzo omkhulu, ingabe uyawuzwa umehluko phakathi kwemibhalo yamaMasorete ne-Septuagint, ingasaphathwa eminye imibhalo yesandla yasendulo, okwenza iBhayibheli libe yizwi likaNkulunkulu? Ake ngithi lokhu ukuqala ngakho. Angiyithandi inkulumo esetshenziswa emasontweni nakubantu abajwayelekile ukuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu. Kungani ngiphikisana nalokhu? Ngoba imiBhalo ayizibizi ngokuthi “yizwi likaNkulunkulu.” Ngiyakholelwa ukuthi izwi likaNkulunkulu liyavela emiBhalweni, kepha kufanele kukhunjulwe ukuthi okuningi kweMibhalo akuhlangene noNkulunkulu ngqo, futhi kuyindaba yomlando yalokho okwenzeka kumakhosi akwa-Israyeli, njalonjalo, nathi ngukuthi uSathane ukhulume futhi nabaprofethi abaningi bamanga abakhuluma eBhayibhelini, futhi ukubiza iBhayibheli lilonke “iZwi likaNkulunkulu”, ngicabanga, liyiphutha; futhi kunezazi ezithile ezivelele ezivumelana nalokho. Kepha engivumelana nakho ukuthi lena yiMibhalo Engcwele, imibhalo engcwele enikeza isithombe sesintu ngokuhamba kwesikhathi, futhi ngicabanga ukuthi lokho kubaluleke kakhulu.
Manje iqiniso lokuthi kunezinto eziseBhayibhelini ezibonakala ziyimpikiswano enye, ngabe lokho konakalisa ukuqonda kwethu kwalolu chungechunge lwezincwadi? Angicabangi kanjalo. Kufanele sibheke umongo wazo zonke izingcaphuno eziseBhayibhelini bese sibheka ukuthi ziphikisana ngokungathi sína kangako, noma ukuthi ziphikisana ngokungathi sína kangako, okusenza silahlekelwe yithemba eBhayibhelini. Angicabangi ukuthi kunjalo. Ngicabanga ukuthi kufanele sibheke umongo futhi sihlale sinquma ukuthi umongo uthini ngesikhathi esithile. Futhi imvamisa kunezimpendulo ezilula kule nkinga. Okwesibili, ngikholelwa ukuthi iBhayibheli likhombisa ushintsho emakhulwini eminyaka adlule. Ngiqonde ukuthini ngalokhu? Yebo, kunesikole sokucabanga esibizwa ngokuthi "umlando wensindiso." NgesiJalimane, kubizwa kanjalo umbeeshenk futhi lelo gama livame ukusetshenziswa yizazi ngisho nangesiNgisi. Okushoyo ukuthi iBhayibheli liwumbhalo oqhubekayo wentando kaNkulunkulu.
UNkulunkulu wathola abantu njengoba babenjalo kunoma yimuphi umphakathi onikiwe. Isibonelo, ama-Israyeli abizelwa ukungena ezweni lesithembiso laseKhanani futhi abhubhise abantu ababehlala lapho. Manje, uma sifika ebuKristwini, ebuKristwini bakuqala, amaKrestu ayengakholelwa ekuthatheni inkemba noma ekulweni kwezempi amakhulu eminyaka. Kwakungemva kokuba ubuKrestu sebusemthethweni ngokoqobo eMbusweni WaseRoma lapho baqala khona ukuhlanganyela emizamweni yezempi futhi baba nokhahlo njenganoma ngubani. Ngaphambi kwalokho, babenobungane. AmaKrestu wokuthoma enza ngendlela ehluke khulu kunalokho okwenziwe nguDavida noJotjhuwa, nabanye, ngokulwa nemiphakathi yamahedeni ezungeze naseKhanani uqobo. Ngakho-ke, uNkulunkulu wakuvumela lokho futhi kaningi kufanele sime sisho sithi, "kahle-ke wena uthini ngoNkulunkulu?" Yebo, uNkulunkulu uyakuphendula lokhu encwadini kaJobe lapho ethi: Bheka ngazidala zonke lezi zinto (ngichaza lapha), futhi wawungekho, futhi uma ngivumela umuntu ukuba abulawe, nginga buyisa lowo muntu ethuneni, futhi lowo muntu angaphinda ame esikhathini esizayo. Futhi imiBhalo yamaKrestu ikhombisa ukuthi lokho kuzokwenzeka. Kuyoba khona uvuko oluvamile.
Ngakho-ke, asikwazi njalo ukungabaza umbono kaNkulunkulu kulezi zinto ngoba asiqondi, kepha sibona lokhu kuvuleka noma kusuka emiqondweni eyisisekelo eTestamenteni Elidala noma emiBhalweni YesiHeberu kuya kubaprofethi, futhi ekugcineni kuye kokusha ITestamente, elisinika ukuqonda kokuthi uJesu waseNazaretha wayeyini.
Nginokholo olujulile kulezi zinto, ngakho-ke kunezindlela esingabuka ngazo iBhayibheli, elenza liqondakale njengokuzwakalisa intando kaNkulunkulu necebo lakhe elingcwele lokusindisa isintu emhlabeni. Futhi, kufanele sazi okunye, uLuther wagcizelela ukutolikwa kweBhayibheli ngokoqobo. Lokho kuhamba kancane ngoba ibhayibheli liyincwadi yezingathekiso. Okokuqala, asazi ukuthi izulu linjani. Asikwazi ukufinyelela ezulwini, futhi noma ngabe kunabathandi bezinto ezibonakalayo abaningi abathi, “kahle, yilokhu kuphela okukhona, futhi akukho lutho olungaphezulu kwalokho,” awu, mhlawumbe sifana nabalobi abancane baseNdiya ababengamaNdiya angaboni fakiers futhi ababebambe izingxenye ezahlukahlukene zendlovu. Babengayiboni indlovu iyonke ngoba babengenalo ikhono, futhi kukhona labo namuhla abathi kahle isintu asikwazi ukuqonda konke. Ngicabanga ukuthi lokho kuliqiniso, ngakho-ke sikhonzwa eBhayibhelini isingathekiso emva kwesinye. Futhi lokhu kuyini, intando kaNkulunkulu ichazwa ngezimpawu esingaziqonda, izimpawu zomuntu nezimpawu zomzimba, esingaziqonda; ngakho-ke, singafinyelela futhi siqonde intando kaNkulunkulu ngalezi zingathekiso nezimpawu. Futhi ngicabanga ukuthi kuningi lokho okudingekayo ukuqonda ukuthi liyini iBhayibheli nokuthi iyini intando kaNkulunkulu; futhi sonke asiphelele.
Angicabangi ukuthi nginokhiye wawo wonke amaqiniso aseBhayibhelini, futhi angicabangi ukuthi ukhona omunye umuntu onawo. Futhi abantu bagabadela kakhulu uma becabanga ukuthi banesiyalo esivela kuNkulunkulu sokukhuluma iqiniso, futhi kuyadabukisa ukuthi amasonto amakhulu kanye nezinhlangano eziningi zeLobukholwa zizama ukuphoqelela inkolo yabo nezimfundiso zabo kwabanye. Ngemuva kwakho konke, umBhalo endaweni eyodwa uthi asibadingi othisha. Singakwazi, uma sizama ukufunda ngokubekezela futhi siqonde intando kaNkulunkulu ngoKristu, singathola isithombe. Noma kungeyona ephelele ngoba sikude kakhulu nokuphelela, kepha noma kunjalo, kukhona amaqiniso lapho esingawasebenzisa ezimpilweni zethu futhi okufanele sikwenze. Futhi uma senza lokho, singahlonipha kakhulu iBhayibheli.
U-Eric Wilson: Ngiyabonga Jim ngokuhlanganyela nathi la maqiniso athakazelisayo nokuqonda.
UJim Penton: Ngiyabonga kakhulu Eric, futhi ngijabule kakhulu ukuba lapha futhi ngisebenze nawe emyalezweni wabantu abaningi, abaningi abalimaza amaqiniso eBhayibheli kanye neqiniso lothando lukaNkulunkulu, nolothando lukaKristu, nokubaluleka iNkosi yethu uJesu Kristu, eyethu sonke. Singase sibe nokuqonda okuhlukile kwabanye, kepha ekugcineni uNkulunkulu uzokwembula zonke lezi zinto futhi njengoba umphostoli uPawulu asho, sibona engilazini emnyama, kepha lapho-ke sizoqonda noma sazi konke.
← Indlela Yokusiza Abanye Ukuba Bagcine Imiyalo KaKristuYiba Nesibindi - UJehova Ungumsizi Wakho →
Ukuhlonza Ukukhulekela Kweqiniso, Ingxenye 10: Ukungathathi hlangothi kobuKristu
UJames Penton ukhuluma ngemvelaphi yezimfundiso zoFakazi BakaJehova
4 5 amavoti
Izinsuku 4 edlule
Sawubona Rusticshore. Okokuqala ngithanda ukuqonda kangcono ukuthi uqonde ukuthini uma usebenzisa igama elithi "ukungasebenzi" ngokubhekisele eBhayibhelini? Ngoba uma ngikuqonda kahle, ungasho kanjani ngasikhathi sinye ukuthi “usenokholo kukho”? Kubukeka kuyaphikisana uma kungekhona ukuhlakanipha ukuthembela ngokuphelele eBhayibhelini njengeZwi LikaNkulunkulu uma ucabanga ukuthi linamaphutha kakhulu kangangokuba ama-akhawunti atholakala kulo angaba amanga, aphikisane noma angathembeki ngenye indlela! Okwesibili ungacaphuna okukodwa kwalokhu “okuphikisanayo okusobala” ezungeze ukulandisa kovuko kumavangeli, njengoba kungenjalo... Funda kabanzi "
Phendula ku Alithia
I-Alithia - Ngingakwenza kanjani (noma omunye umuntu, ngaleyo ndaba) ukubeka ukholo ebhayibhelini lapho bezwa ukuthi linamaphutha nokuphikisana? Kulula. Imibhalo ayisitsheli ukuthi uNkulunkulu welula isandla sakhe esezulwini futhi wasebenzisa umuntu ngokoqobo ukubhala izwi lakhe, igama nezwi. Kusitshela ukuthi "abantu bakhuluma" (1 Petru 2: 21,22) njengoba "babeqhutshwa" ngumoya ongcwele, njengoba nginesiqiniseko uyazi. Njengoba nje umqhubi eshayela i-symphony futhi ebasiza, futhi akayona into eyengeziwe uma i-violinist inquma ngamabomu ukudlala inothi phezulu... Funda kabanzi "
Phendula ku i-rusticshore
Esicaphunweni esingenhla sika-1 Peter 2: 21,22. . . Ngoba akukho siprofetho esake senziwa ngentando yomuntu, kepha abantu bakhuluma okuvela kuNkulunkulu beqhutshwa nguMoya oNgcwele. (ESV)
Izinsuku 3 edlule
Mfowethu Rusticor othandekayo, ngiyaxolisa uma ngabe ubuthatha le ndlela yami njengokufiphala nokungabi nasimilo ebengingaqondile. Kodwa-ke siyelulekwa ukuthi sithathe inkemba yomoya empini yethu yomoya. Yebo impi engokomoya! Inkemba iyisikhali esihlaselayo, futhi ngaqhubeka nokuhlasela ngokomoya. Kungabonakala njengokuphambuka, kepha angixoli ngokusebenzisa inkemba engokomoya njengoba ngicabanga kunesidingo. Ngakho-ke ngokuqhubeka kokufanisa kwakho nomqhubi womculo ngicabanga ukuthi lokhu akufani. Isibonelo lapho uNkulunkulu ehlose ukuthi abantu bazi ukuthi liyini izwi lakhe, uyaqiniseka... Funda kabanzi "
Siyabonga ngaleyo mininingwane nge-Apocrapha. Kungakuhle ukuba nendatshana ekhuluma ngaleyo ndaba. Amavolontiya ???
Umbono omuhle. Ngaphezu komehluko omkhulu okhona phakathi kwemibhalo eyaziwayo kaPaul vs izinsolo zokukhohlisa njengoba kuhlobene nokwehluka kohlelo lolimi..Mhlawumbe noma ngubani - 1) Dweba umehluko phakathi kwe-NT Apocrypha nePseudepigrapha 2) Hlaziya ukuthi ngabe umlobi kaMark wayevela ePalestine ngamavesi athile - impela uMarku waye… wayengumbhali? 3) Yiziphi izikole, uma kukhona ezinqume ukuba khona ngamaqiniso emivubukulo njengoba kumayelana noMarku, uJohane, uMathewu, uPetru kanye nemizi yakubo? Ngaphezu kwalokho, ezikhathini zasendulo, “obani” ngokuvamile ababefundiswa ukufundwa? Ukufunda nokubhala kwakufundiswa ngasikhathi sinye, njengoba kwakunjalo... Funda kabanzi "
"U-Eric - Bengizoshaya i-minus ebomvu ukunikisela isikhathi ... Kodwa akuvunyelwe. ”
Akunasidingo salokho. Kuyakwehlisa isithunzi.
amahora 13 edlule
Rusticshore othandekayo. Ngiyazifundisa mayelana "nemibhalo elahlekile" noma i-Apocrypha njengoba kuchaziwe. Ngididekile ngalesi sikhathi ngumthamo wezinto ezibonakalayo kanye nobumnandi bemibhalo! Okusuka encwadini ka-Enoch lapho ichaza khona ukuzalwa kukaNowa. Ekuzalweni unezinwele ezimhlophe, masinyane asukume adumise uNkulunkulu! Hawu wee wow. Ngokwakho ukuphawula ngenhla ngabe uphakamisa ukuthi kufanele kubuzwe ukuthi "ngubani ongafundiswa" ukwahlulela ngobuqiniso bama-akhawunti anjalo? Ama-apocrypha we-OT, i-Pseudepigrapha, i-apocrypha ye-NT kanye nabaningi futhi abahlukahlukene "balahlekile... Funda kabanzi "
Amaminithi 25 edlule
Mfowethu. . . Ngivame ukuvumelana nesilinganiso sezazi ezingongoti ngale ndaba ye-apocrypha ye-OT, kanye nemibhalo ye-apocrypha ye-NT. Ngempela, kuningi kakhulu endleleni yokwaziswa ngale ndaba, ngokwesilinganiso sami, ukumane ngihlanganyele ekuphawuleni kweBP okujwayelekile. . . hhayi ukuphakamisa ukuthi ucwaningo oluningi aluhambisani namazwana we-BP! Kepha imibhalo ye-OT ne-NT ye-apocrypha inkulu kakhulu. Kepha njengoba kumayelana nemibhalo ethile ye-NT ye-apocrypha - le ndaba ithathe izazi eziningi iminyaka ngeminyaka yokufunda kanzima nohlelo lolimi... Funda kabanzi "
Kugcine ukuhlelwa imizuzu eyi-10 edlule nge-rusticshore
Sawubona Meleti, Uma nje kuyisikhuthazo sokuba nolwazi olwengeziwe ngale ndaba, ngithanda ukuthola ithuba lokuhlanganisa eminye imininingwane etholakalayo ngale ndaba. ( I-Apocrypha nePseudepigrapha imibhalo) yokwethulwa kwesikhathi esizayo uma yamukelwa.)
Ngiyethemba ukuthi bazofaka uchungechunge lweNarnia ngu-CS Lewis njengoba sengivele ngazifunda.
Izinsuku 2 edlule
Ohloniphekile, u-Alithia. Singakhipha imininingwane ku-athikili futhi mhlawumbe senze nevidiyo kuyo.
Kuwo, vele udinga isikhathi esithile ukumboza okuqukethwe bese ukhiqiza isifinyezo.
Uthando kubo bonke ubuzalwane obuvela e-Alithia.
PS Kuhle ukubona umuntu wobudala bukaDkt Pentons esakhipha okuqukethwe okufanelekile. Ngingafisa kuphela ukuba nengqondo ebukhali ngaleso sikhathi! Wenze kahle mfowethu Penton.
Izinsuku 10 edlule
Angikholwa neze ukuthi "iZwi likaNkulunkulu" aliphazamisi. Ngisathembele kukho, yize ngisebenza ngokucophelela ukuzama ukuthola izingxenye ezingahambanga kahle, uma kungenzeka lokho kungenziwa futhi kufezwe… .ngisho nezazi uqobo. Ngaphezu kwalokho, umuntu akanakukuziba ukuphikisana okusobala, noma ngabe abanye bakubheka njengokuncane, okunye kubalulekile… njengokulandisa kovuko kukodwa kumavangeli ahambisanayo. Kunokwehluka okuphawulekayo emavangelini njengoba kubhekiswa kulokhu kukodwa. Kimi… Ngizama ukukhumbula ukuthi laba kwakungababhali abehlukene benemibono eyahlukahlukene… .nokho, kukhona umehluko ocacile ezindabeni,... Funda kabanzi "
UMerci uthela konke ukubeletha. Oui, il ne faut pas confondre la Parole de Dieu avec l'histoire partielle de l'humanité racontée dans la Bible. Pour moi, la Parole de Dieu est l'enseignement pur du Christ transmis en partie dans les évangiles. Parfois, même les apôtres ont ajouté des pensées abasebenzi. UPaul uthi kweyoku-1 kwabaseKorinte 7: 12 ”Et aux autres, je dis, oui moi, non le Seigneur: Si un frère a…” UPaul akazange athembele ukuthi umlandeli weParole du Seigneur, uzokwazi ukuthi ngubani ' il n'impose pas. Parfois même Dieu a fait des concessionantant sa... Funda kabanzi "
Ngiyabonga u-Eric noJames ngesifundo somlando esithakazelisa kakhulu! Bengihlala nginentshisekelo ku-akhawunti yevangeli yowesifazane alethwe kuJesu ngokufeba. Ngangicabanga ukuthi yisibonelo esihle kangaka sozwelo lweNkosi yethu nesifundo esihle kakhulu ngokuthethelela. Lapho isuswa enguqulweni yebhayibheli 'lenkemba yesiliva', ngazibuza ukuthi kungani. Eqinisweni ngatshela umngani wami wakudala (owayeseyi-JW) ngokususwa kwayo naye wethuka kakhulu futhi akakholwanga waze wazibhekela ibhayibheli lakhe. I-WT incike kakhulu kuSinaiticus (330-360 CE)... Funda kabanzi "
Phendula ku Chester
AmaHeberu 10: 26